Dadaal ay wadaan beesha caalamka, iyo ururada bulshada rayidka iyo dhaqanka. Oo ka socda muqdisho. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dadaal ay wadaan beesha caalamka, iyo ururada bulshada rayidka...
Dadaal ay wadaan beesha caalamka, iyo ururada bulshada rayidka iyo dhaqanka. Oo ka socda muqdisho.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inay socdaan dadaallo xoogan oo ay wadaan dhinacyo kala duwan, kuwaas oo la doonayo in la’isugu soo dhoweeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ka jira dalka.
Wararka ayaa sheegaya in dadaalada ay qeyb ka yihiin wakiilada beesha caalamka, siyaasiyiin, hoggaanka ururada bulshada rayidka iyo dhaqanka.
Ilo ku dhow dhinacyada wada dadaalladaasi ayaa shaaca ka qaaday in madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah kuwa dowlad goboleedyada ay ka cagajiidayaan waan-waanta laga dhex-billaabay ee lagu doonayo in dib loogu sii amba-qaado wada-hadallada.
Sidoo kale xubnaha wada dhex-dhexaadinta ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey inay guuleysan doonto waan-waantooda, isla-markaana ay dib u billaaban doonaan shirarkii u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada.
Previous articleQareenkii Madaxweyneyaashii Iraq iyo Yugoslavia oo ku geeriyooday magaaladda New York
Next articleTALIS NUGUL OO AF LACAARIYA, NAXASH SAARAN OO NIYAD JABNA KU DHACAY
Ururka Al-Shabaab ayaa war ka soo saaray Qaraxii xalay ay ku dhinteen ku dhawaad 25 qof oo u badnaa dad shacab ah oo marayay...